Cotton oriọna na paraffine wax kandụl - China Litbright kandụl (shijiazhuang)
Basic Info Model No .: G75-0450H Type: tapered ihe: paraffin Wax ojiji: olili ozu, Holiday, SPA, Religion, Wedding, Party, Birthday, Home Lighting, Ịchọ Mma Function: Lighting agba: White flavor: Unscented Size: 7 * 10cm Burning Time: 8H nhazi: Machinery dị iche iche nha: Good Quality agbakwunyere Info packaging: igbe nkwakọ Productivity: 30 ton kwa ụbọchị Brand: Litbright Transportation: Ocean, Land, Air Ebe nke Si Malite: China Tụkwasịnụ Ikike: 3 × 20 'fcl Akwụkwọ: OA BSCI ma ọ ...
Ịdị No .: G75-0450H
Dị iche iche nha: Good Quality
Packaging: igbe nkwakọ
Arụpụtaghị: 30 ton kwa ụbọchị
Tụkwasịnụ Ikike: 3 × 20 'fcl
Akwụkwọ: OA BSCI
Ihe onwunwe anyị na otu onye bụ 100% paraffin Wax ndị ọzọ bụ 70% paraffin wax na 30% palm mmanụ. Anyị isi ngwaahịa na-agụnye N'ogbe White Ogidi kandụl, multi-acha ezinụlọ kandụl ihe ịchọ mma, na-acha ọcha na-egbuke egbuke kandụl, multi-acha na-egbuke egbuke kandụl, ọcha fluted kandụl, multi-acha fluted kandụl, ọcha taper kandụl, multi-acha taper kandụl. Anyị kandụl na-mere nke kacha mma akụrụngwa, ihe ndị a na-ezi àgwà na elu aghụghọ, nke na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa.
Litbright kandụl Factory e guzobere nineties narị afọ gara aga. Dị ka a emeputa na factory na Chile China, anyị nwere ihe karịrị afọ 10 nke exporting kandụl. Anyị factory ebe bụ banyere 48.000 square mita na anyị bụ otu n'ime ndị kasị kandụl emepụta na Hebei. Anyị nwere ihe karịrị 800skilled ọrụ na 40 technicians. Anyị mmepụta ikike: 4 × 20 'containers / ụbọchị. Ihe ndị a na-ezi àgwà na elu aghụghọ, nke na-na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa. Anyị na ngwaahịa na e exported ka America, Europe, Africa na Australia, etc ihe karịrị iri asatọ mba.
Ahịa logo: anabata
General nnyocha na gwara tupu i bulie
Third party nnyocha: anabata
ọ bụla ntụpọ ngwaahịa ma ọ bụ àgwà nsogbu (e wezụga mmebi n'oge transporation) nwere ike dochie na-esonụ iji.
bụla ntụpọ ngwaahịa ma ọ bụ àgwà nsogbu nke ime ka ahịa si weere nwere ike ụgwọ atụrụ na ha ọzọ iji.
Previous: ọcha ezinụlọ kandụl
Next: Religious Ogidi ọcha kandụl
N'ogbe Japan akwụkwọ igbe ọcha ezinụlọ ...
Kandụl emepụta ọcha taper kandụl